एमालेमा उपाध्यक्ष ३ कि ७ ? – Deep Sanchar
गृहपृष्ठ ∕ पत्रपत्रिका ∕ एमालेमा उपाध्यक्ष ३ कि ७ ?
दीप संञ्चार असोज १०, २०७८ गते ७:३५ मा प्रकाशित
एमालेमा सात उपाध्यक्ष र त्यति नै संख्यामा सचिव बनाउन नेताहरूले सुझाव दिएका छन्।
केन्द्रीय कमिटीको जारी बैठकमा उपाध्यक्षको संख्या थप्न सुझाव दिइएको हो। उपमहासचिव विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बनाइएका समूहहरूले उपाध्यक्षको संख्या थप्न सुझाव दिएका हुन्। उपमहासचिव पौडेलको प्रस्तावमा तीन उपाध्यक्ष र ७ सचिवको प्रस्ताव गरिएको छ।
समूहगत छलफलपछि शनिबार अधिकांश टोली नेताले उपाध्यक्ष बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले प्रदेशअनुसार उपाध्यक्ष संख्या राख्नुपर्ने सुझाव आएको जानकारी दिए। समूहगत टोली नेताहरूले उपाध्यक्षलाई प्रदेश नेतृत्वको जिम्मेवारी दिन पनि सुझाव दिएका थिए।
नवौं महाधिवशेनदेखि ५ उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको थियो। पार्टीमा विवादकैबीच अध्यक्ष ओली निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमा २ र पछि १ थप गरेर तीन उपाध्यक्षको प्रस्ताव गरिएको थियो।
प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईका अनुसार पार्टीको कुनै पनि कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल मात्र जिम्मेवारी पाउने गरी विधानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव टोली नेताहरूले राखेका छन्।
पार्टीको जिम्मेवारी लिन ७० वर्ष उमेर हद कायम गर्न पनि समूहगत छलफलबाट सुझाव आएको भट्टराईले जानकारी दिए। पार्टीको हालको विधानमा पनि ७० वर्षे उमेरहद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल मात्रै रहन पाउने व्यवस्था छ।
प्रदेश १ को समूहबाट हिक्मत कार्की, प्रदेश २ बाट रामचन्द्र मण्डल, बागमती प्रदेशबाट आनन्द पोखरेल, गण्डकी प्रदेशबाट जगतबहादुर विश्वकर्मा, लुम्बिनी प्रदेशबाट दलबहादुर राना, कर्णाली प्रदेशबाट यामलाल कँडेल र सुदूरपश्चिमबाट कर्ण थापाले समूहको सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। यस्तै, उपत्यका विशेषबाट माधव ढुंगेल, जनसंगठनबाट खिमलाल भट्टराई र विभागको तर्फबाट खगराज अधिकारीले सुझाव राखेका थिए। अन्नपूर्ण पोस्टमा सुरेन्द्र काफ्लेले खबर लेखेका छन् ।